अभिनेत्री आँचलको लकडाउनमा बढ्यो आम्दानी, राखिन् म्यानेजर – Sandesh Press
December 8, 2020 298
काठमाडौ । कोरोना कहरकाबीच धेरै वेरोजगार भएको बेलामा अभिनेत्री आँचल शर्मा भने वेफुर्सदिलो भएकी छन् । उनले आफ्नो आम्दानी बढ्दै गएको संकेत गरेकी छन् । विवाह अघि सम्म आफ्नो काम आफै गर्दै आएकी आँचलले आफ्नो सहयोगका लागि म्यानेजर राखेकी छिन् ।
Prevकक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन बारे आयो यस्तो सुचना ! सबैले पढ्नै पर्ने !
Nextबिहेपछी रमेश प्रसाईकी पत्नि नन्दा पहिलो पटक मिडियामा, पति रमेश र सासुको गरिन् मुक्त कण्ठले प्रशंसा
कोरोनाबाट नेपालमा आज एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै जनाको मृत्यु